R/wasaare Khayre oo ka qeyb galay Munaasabad looga hadlayey Taakuleynta Ciidamada – WARSOOR
R/wasaare Khayre oo ka qeyb galay Munaasabad looga hadlayey Taakuleynta Ciidamada
Muqdisho – (warsoor) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa caawa ka qeyb gaay munaasabad lagu soo bandhigeyey waxii u qabsoomay Guddiga Taakuleynta Ciidanka qalabka sida, ee dhawaan uu magacaabay Madaxweyne JFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Guddiga ayaa sheegay iney diyaariyeen dariiq ay Shacabka Soomaaliyeed ku soo gaar siin karaan kaalmada ay ugu talagaleen in lagu caawiyo ciidankooda.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa xusay muhiimadda ay Ciidamadu u leeyihiin dal kasta iyo sida Soomaaliya ay maanta ugu baahan tahay soo celinta karaamadii ay lahaayeen ciidankeenu. Isagoona baaq ku aaddan iney ciidamadooda taageeraan u diray bulshada Soomaaliyeed, ay garab istaagaan hawlaha lagu horumarinayo dhismaha dawladnimada.
Mudane Khayre ayaa balan qaaday in Xukuumaddu ay 20 kun dollar siin doonto gudiga taakuleynta Ciidamada si loo dar-dargeliyo hawlaha gudiga.
Munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qeyb galay masuuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda, maamulka gobolka Banaadir, saraakiil iyo siyaasiyiin.
“Waxaan Qirayaa In Cabdiraxmaan Cirro Uu Yahay Nin Wanaagsan, Waxase Aan Leeyahay Somaliland Maanta Waxa Ay U Baahan Tahay Hoggaamiye Wanaagsan Ee Uma Baahna Nin Wanaagsan.” Wasiir Maxamuud Xaashi Cabdi